‘ॐ’ उच्चारणबाट यी ६ राेगका वि’रामीहरु ठिक हुने प्रमाणित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/‘ॐ’ उच्चारणबाट यी ६ राेगका वि’रामीहरु ठिक हुने प्रमाणित !
१ थाइराइड: हरेक दिन ओम्काे उच्चारण गर्दा थाइराइडको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
२ एन्जाइटी: ओम्काे उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ । यसको उच्चारणले त’नाव, डरजस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
३ स्ट्रेस वा टेन्सन: ओम् मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ । यसले चि’न्ता, त’नाव, मानसिक थ’कानलाई टाढै राख्छ ।
४ ब्लड सर्कुलेसन : ओमको उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा र’गतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ ।
५ स्वस्थ मुटु: दैनिक यसकाे जप गर्दा ल‌ंग्स, बिपी र ब्लड सर्कुलेसनमा सन्तुलित हुन्छ । यसले मुटुपनि स्वस्थ रहन सहयाेग गर्छ ।
६ डाइजे शन : ओम् उच्चारणले पेटमा भाइब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ ।